Linus Torvalds na-ahọrọ ọkọlọtọ Linux na Gnome na KDE nwere ike ibute nke a | Site na Linux
N'uzo nke ya, Linus Torvalds, ihe na-erughi otu afọ gara aga, laghachiri na nkwupụta a "Linux kụrụ na desktọọpụ" Ma ọ bụ na-etinye nwayọọ, ama ghọtara na ama ama na-emeghe iyi sistemụ "mgba iji merie na desktọọpụ", ma gbaa mbọ dokwuo anya na ihe kpatara nsogbu ahụ bụ Linux bụ nkewa okike.
N'eziokwu, N'echiche a siri ike, Linux bụ kernel, nke ahụ bụ, akụkụ ahụ nke sistemụ arụmọrụ na-ejikwa akụ kọmputa ma na-eje ozi dị ka akwa nkwukọrịta n'etiti ihe dị iche iche (ngwaike na ngwanrọ).
Ọ bụ akụkụ a na-adịghị ahụ anya nke sistemụ arụmọrụ. N’uzo sara mbara, ikwu banyere Linux bụ ịtu aka maka sistemụ arụmọrụ ọ bụla nke dabere na kernel; Nke a bụ otu n'ime akụkụ nke na-eme sistemụ arụmọrụ a pụrụ iche, ebe ọ bụ na onye ọrụ nwere ike isonye n'etiti 319 ọdịiche ma ọ bụ nkesa ma ọ bụrụ na anyị arapara na ndepụta LiveCD.
Maka onye ọ bụla, ọtụtụ nhọrọ dị iche iche na-agbagwoju anya. Ọ bụrụ na anyị ka ga-eburu n'uche eziokwu ahụ bụ na onye ọrụ ka ga-ahọrọ n'etiti Gnome, XFCE, LXDE, KDE, Cinnamon, Mate (na naanị ikwu maka mpaghara desktọọpụ kachasị ewu ewu) yana ọ ka njọ ma ọ bụrụ na anyị agbakwunye ndị njikwa ahụ site na windo (njikwa window) na ndepụta a sara mbara.
“M na-achọ ka ndị obodo ga-eme ihe na-kwaga kwupụta a etozu desktọọpụ àjà, na-agba ọsọ na iche iche nke sistemụ nrụọrụ. Linus Torvalds kwuru, n'onwe m, enwere m mkpasu iwe banyere otu ibe akwụkwọ Linux a ji nwayọ nwayọ na desktọpụ.
O yiri ka mma nke Linus Torvalds adịghị ada na ntị nke ndị ntị chiri. N'ezie, Dabere na ihe ndị mere n'oge na-adịbeghị anya, ntọala Gnome na KDE ekwuolarị ha emeghewokwa ntuziaka iji lee anya na ntụziaka a nke onye okike nke Linux Kernel na-atụ na ọchịchọ, ebe ndị mmepe nke gburugburu desktọọpụ a ga-esonye.
Ma ọ bụ site na Nọvemba 12 ruo 15 nke afọ dị ugbu a, ha na-ahazi Summit Linux Applications Summit (IHE). Ebumnuche a bụ ịmekọrịta mbọ nke obodo abụọ ahụ iji wulite usoro okike nke ngwa gafere nkesa dị iche iche ma mepee ahịa maka mmadụ niile.
Ọ sịrị, "LAS chọrọ iji gbaa ume ka ekepụtara ngwa dị mma, chọọ ohere ndị akwụ ụgwọ maka ndị mmepe oghere, ma zụlite ahịa na-arịwanye elu maka sistemụ arụmọrụ Linux."
Tupu afọ a, a na-akpọ ihe omume ahụ Nnwere Onwe Ngwa. Na 2018, GNOME Foundation mere ka ọbịa. Ọzọkwa, ọ bụ maka ịmepụta mmekọrịta nke mgbalị obodo iji gbaa ndị ọzọ ume ịzụlite ngwa maka sistemụ arụmọrụ n'efu. N'afọ a, ihe ngosipụta bụ njikọta nke ntọala abụọ dịka ndị isi ha kwuru.
“LAS bụ otu n’ime ọtụtụ ihe iji wepu usoro ụlọ ọrụ na-aga nke ọma. Site na isoro KDE mekorita, anyi na egosiputa ochicho iwulite udiri ihe okike nke ngwa nke gosiputara na oghe oghe na ngwanrọ mepere emepe di nkpa; teknụzụ na nzukọ anyị tinyere iji mezuo nke a bara uru ma dịkwa mkpa, "Onye isi nke Gnome Foundation kwuru.
“Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị ekepụtala ihe ngwọta dị mma nke ndị ọzọ na-eji gburugburu ụwa. Ọ bụ site n'ịrụkọ ọrụ ọnụ ka anyị nwere ike ịkarịa nchikota akụkụ ahụ. Site na GNOME, na-adabere na mmekorita nke ọtụtụ nkesa na ndị mmepe ngwa, anyị ga-enwe ohere ịrụkọ ọrụ ọnụ, kesaa echiche anyị ma nye usoro ikpo okwu nke a ga-ewukwasị usoro nsogbu ọgbọ ọzọ. Onye osote onye isi oche nke KDE kwuru.
Ya mere, ọ dịkarịrị mma ịsị na ọrụ ha ga-eji ọrụ n'aka ga-abụ ịnye onyinye nke kwesịrị ịgụnye ọtụtụ ma ọ bụ nkesa niile, nke abuo, ma puta ihe karie, nye onyinye a jikọtara ọnụ na gburugburu obibi.
Agbanyeghi na mmeghari a agaghi abu nke mbu, dika otutu ihe emere banyere ya ma echefuola ya, obu ezie na ta na teknụzụ ndi eji ngwa dika Snap, Flatpak ma obu AppImage nwere ike bụrụ otu n'ime ntọala maka onyinye ngwa ngwa.
Isi: https://linuxappsummit.org, https://dot.kde.org, https://www.gnome.org/
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Linus Torvalds na-ahọrọ ọkọlọtọ Linux na Gnome na KDE nwere ike ibute nke a
RMS kwa ụbọchị na-amasị m mma.
Achọpụtara m na ọ bụ ihe nzuzu ikwere na gnu-linux furu efu agha desktọọpụ n'ihi ihe a na-akpọ mpekere ma ọ bụghị n'ihi na ọ chere nnukwu anụ ọhịa nke Microsoft na Apple ihu na usoro azụmahịa ha guzobere na mbara ụwa. Gnu-linux na-arụ ọrụ zuru oke na desktọọpụ na nnwere onwe ahụ zuru oke, ị nwere ike ịhọrọ nkesa nke masịrị gị wee bido ya na nka kọmputa ọ bụla, ị nwere ọtụtụ ngwaọrụ ị nwere. Ahụghị m ọdịda ọ bụla na desktọọpụ, ikekwe ọ bụ onye ọrụ kwesịrị iche banyere kọmputa dị ka igwe dị mgbagwoju anya karịa ngwa nkịtị.
ọ bụ agha na-efu site na echiche ya na ọ bụghị sistemụ gbadoro ụkwụ na-eme ihe ụtụtụ n'ihi ọkwa ya dị mgbagwoju anya onye ọrụ ọfụma ga-ahọrọ windo na mac mgbe niile, yabụ ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na Linux anaghịzi adị mgbagwoju anya dị ka ọ dị na mbụ ma n'otu aka ahụ ọ na-aga n'ihu na-enwe usoro mmụta ka elu karịa ndị na-ama ya aka, na mgbakwunye na nke a echere m na ị mehiere na nkọwapụta na onye ọrụ zụtara kọmputa nkịtị dịka ngwa ọrụ ebe ọ bụ na ị na-asọpụrụ echiche gị echere m na enwere enweghị ebumnuche ebe ọ bụ na onye ọrụ ọ bụla enweghị ihe ọmụma banyere sistemụ ma enweghị mmasị ịnwe ya, naanị ihe ọ chọrọ bụ ka pc nye ya dị mfe iji dozie nsogbu ndị ọzọ dị mgbagwoju anya ma n'otu oge ahụ ọ bara uru ịbụ ihe bara uru ... ma ọ bụrụ na ha achọghị ịbụ onye ọrụ dị elu
Na sistemụ, ndị injinia na ndị mmepe mepụtara ihe ịtụnanya kachasị na mgbagwoju anya, naanị iji nye onye ọrụ ihe ngwọta, yabụ na-enweghị nkwanye ùgwù onye ọrụ anaghị ada ada mana ihe ọzọ, ọ nwere ike ịbụ ụzọ, usoro, ihe m maara, ma ọ dịghị mgbe onye ọrụ njedebe nke ọrụ ahụ bu n'obi, ekwenyere m na a ga-eduzi onye ọrụ ahụ na-enweghị ihe ọmụma banyere ihe ọ bụla, tinye ya na ndepụta dị mfe maka ntinye ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma na ohere nke ịgbagọ iwu, iwu bụ isi nke anyị ji anyị na-etinye ebe a,
Obi oma ekele.
Zaghachi Loren ipsum
Ka anyị lee ma ọ bụrụ na mba, m kọwaara m na enwere nkesa 100.000 kwa nke ọ bụla maka ọrụ dị iche ma ọ bụ na ngwa ọ bụla bụ maka interface dị iche (dịka ọmụmaatụ) anaghị enye m nsogbu nke ukwuu.
Ihe na-ewute m n'ezie bụ na dịka ọmụmaatụ maka sistemụ ahụ, e nwere sava ọnụọgụ abụọ na-adị ka nkịta na pusi (ana m ekwu n'ezie nke a nke Jackd na Pulse ọdịyo), na mgbe ị kwụsịtụrụ akụrụngwa Jackdbus (mmụọ ọjọọ sava ọdịyo tupu e kwuru) a kwụsịtụrụ na Ya mere, mgbe ị na-agbake nnọkọ ahụ, ị ​​na-ahapụ enweghị audio, na aka nke ọzọ na mmemme adịghị enweta a facelift (Rosegarden biko, na-echetara m nke 80s cubase nke Atari ST, kwesịrị redundancy wee buru ụzọ pụta maka ikpo okwu a tupu PC), na ọtụtụ ndị na-esote midi enweghị akara ngosi kwesịrị ekwesị etinyere (RoseGarden na-akpọ mmemme nke atọ kama akara dịka Denemo ma ọ bụ NoteEdit na-etinye na otu mmemme ahụ) ) ma ọ bụ ghara itinye mmezi fluidsynth n'otu usoro MIDI ahụ, na nkenke (na anaghị m eso n'ihi na ma ọ bụghị na ozi ahụ ga-adị ogologo) ihe ndị ahụ na-ekwekọghị ekwekọ ga-abụ ihe na-egbochi GNU / Linux ịkwalite ụdị ndị ọrụ niile .
Site n'echiche m, mejuputa Jackd na Pulse n'ụzọ doro anya wee hazie ya site na njikwa ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji sistemu ọdịyo abụọ ma ọ bụ naanị otu na onye ọrụ njedebe, ma ọ bụ LMMS mejuputa onye na-ekiri akara dị ka Denemo ma dozie ya ụfọdụ chinchi ga-zuru oke m ka ihe atụ)
PS Ndo banyere ụgwọ ahụ.